* Light Of Myanmar *: ကျောင်းသားများအတွက် ၀ိပဿနာ
Posted by * In Search of Truth * at 5:59 PM
မောင်ဇော်မျိုးရေ ကလေးဆန်လှချည်လားညီလေးရဲ့ ညီလေးကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ၀ိပသနာတွေဘာတွေပြော ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုသုံးသပ်နဲ့ဟုတ်လှပြီထင်နေတာ ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကွာ ကိုယ့်ကိုဆဲ မခံယူရင်ဘာမျှမဖြစ်ပါဘူး ငါလဲအဆဲခံရတာဘဲ ထောက်လှမ်းရေးအပြောခံရတာဘဲ မခံယူတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ အရေးကြီးတာရပ်တည်ချက်ဘဲ ယခုမြန်မာပြည်သားတွေရိုင်းတယ် ဆဲတယ် ဟိုစွပ်စွဲ ဒီစွတ်စွဲလုပ်တယ်ဆိုတာ အစ်ကိုသိရသလောက် မြန်မာစစ်တပ်ထဲကလာတာကွ သူတို့နဲ့မတည့်ရင် ကွန်မြူနစ် ပုဆိန်ရိုး အမျိုးစုံဘဲ ဟဲဟဲ အဲဒီဥာဉ်က လူထုထဲ ရောက်လာတာဘဲ ရင်းမြစ်ကိုရှာကြည့်ကွ ဟဲဟဲ
ကျနော့ ဆီမှာ တင်တဲ့ Comment တွေအားလုံးကို စီစစ်ပြီးမှ လက်ခံပါမယ်ခင်ဗျာ။ ဒါနောက်ဆုံးလက်ခံတဲ့ Comment ပါ။ အစ်ကိုတို့ အဆင့်နဲ့ တန်တဲ့ အခွင့်အရေးကတော့ စာပေးစီစစ်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ မဆီမဆိုင်ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာမှန်သမျှ လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ အခုလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တာနဲ့ ကလေးဆန်တာမျိုးပေါ့ခင်ဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ အခုလို စစ်ခွေးဆိုတဲ့ စကားလုံးလို အောက်တန်းစား အသုံးအနှုံး ပိုင်ရှင်တွေဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာမှ လက်ခံမည် မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ လာလည်တာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ =) . အစ်ကိုတို့နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ပုံစံလေးကို လုပ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ
အစ်ကိုခင်များ ...ရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ(၂၂.၁၀.၂၀၀၇)အရ`သူဌေးသမီးနဲ့သူခိုး´ဖြစ်ရပ်မှာ..ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့စကားကအမှန်လားခင်မျာ၊ကျမ်းထဲကအဆိုကိုသိရင်ဖြေပေးပါ၊မဖြေလည်း… နေပါစေခင်မျာ၊စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။မိန့်တော်မူတာအမှန်ဆိုရင်တော့…ကိုယ့်ဘာသာတရားကိုပြန်လေ့လာရအုံးမယ်။ကျေးဇူးပြုပြီး ဘာသာရေးသီးသန့်ပဲ ရှင်းပြပေးပါ။အစ်ကို့ပြန်ကြားမှုကို linnkhet@gmail.comမှာပဲ ဖတ်ချင်ပါတယ်။
ကျနော် ဘုရားဟောနိပါတ်တွေကို မနှံ့စပ်ပါခင်ဗျာ
Mr Hell said...
Zaw Myo, I like your thinking. I agreed that most of us(myanamr) need proper way to approach democracy.
In your cbox, by user name zaw myo, talking about monks and soilders. It is yourself or other people.
I wish it is not yourself.
ဇော်မျိုးနာမည်နဲ့ ဘုန်ကြီးတွေ သတ်တာကို အားပေးတာ ကျနော် မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ ဇော်မျိုးနာမည်နဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကို ဖားတဲ့စကားပြောတာ ကျနော် မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်စစ်ဗိုလ်တွေကို မဖားပါ။ ထို့အတူပဲ မဆဲပါ။ နှစ်ခုစလုံးဟာ အဓိပါယ်မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ထင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲလို ကျနော့နာမည်နဲ့ ပေါက်ကရတွေလုပ်လို့ ဆီဗုံးကို ပိတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
When will you be writing another topic? It's beenawhile since the last one.
သို့ ကို 4freeburma
အစ်ကိုမောင်ဆန် အလုပ်တွေ များနေလို့ပါ။ ကျနော်ကလည်း ကျောင်းစာတွေနဲ့ ချာချာလည်နေပါတယ်။ အခြေအနေပေးတာ နဲ့ပြန်ရေးပါမယ်ခင်ဗျာ။